PressReader - Ilanga: 2017-10-30 - UHULUMENI LO YISIGANGI ESIVIKELA EZINYE IZIGANGI
UHULUMENI LO YISIGANGI ESIVIKELA EZINYE IZIGANGI
Ilanga - 2017-10-30 - Izindaba - Mkhekhelezi@webmail.co.za
NIYABONA bazalwane, le ndaba yokubhincisa iqiniso sengathi yintombi nto iqala ukuya esokeni ngenxa nje yokuthi uma likhulunywa kuzonyathelwa amalungelo abantu abathile, gede mani!
Namuhla ake siwapake ekhabetheni kuhle kwama- glass okwenzela izivakashi i- squash, uma singekho zenzelwe iswidi 8 - ungangibuzi-ke ukuthi yini leyo, sasiyibiza kanjalo kodwa thina sisakhula le KwaDlangezwa, eMpangeni.
Sengathi nje ngelinye ilanga amaphoyisa, amasosha ngisho nonogada imbala bangahlaba ikhefu lesonto lonke, ofuna ukuntshontsha azintshontshele, ofuna ukugqekeza akwenze lokho, ofuna ukushisa amathayi emgwaqweni akwenze lokho ngokukhululeka. Hhayi bakithi kanti abantu bayokhuzwa umzuzu nomzuzu njengenja ehalayo kanti kwakhala nyonini?
Kubukeka sengathi abantu le nto yokucabanga abayiphiwa mahhala ngubaba omdala osezulwini kwakumele bayikhokhele ngoba kuyacaca ukuthi kabayisebenzisi nje yingoba kabayazi i- price yayo.
Mina ogobe amadlangala lapha- ya KwaMamdekazi, eMariannhill, uma ngizivocavoca ngisebenzisa inkundla yaseNagina - khona impela eSdekazini esazibonelwa ngama- wish-to-be-tsotsis aseSunshine naseLuganda - kangethukanga ngempelasonto edlule ngifika khona izintambo zokukhanyisa amalambu enkundleni zisikiwe.
Ngeke-ke ngiqambe amanga ngithi lesi siwula esenze le nto sihlukumeza uhulumeni, sihlukumeza thina ngqo bakhokhi bentela ngoba yithina esizokhokhela ukuba kutholakale izintambo ezintsha.
Yithina futhi esesihlupheka sijimela enkundleni emnyama. Uma sezibanjwa lezi zigilamkhuba umphakathi usuzithintitha ngoswazi, kugxuma wona kuqala uhulumeni uthi:
“Uswazi saluvala across the board, hhayi ezikoleni kuphela. Abashaye lo muntu siyababopha manje!” Izigebengu ziyohlale zikhomba ngomunwe wenhlamba ngoba nabantu abaphethe izwe bahlale benukwa ngobugebengu obuqulekisa i- dinosaur - manje umbopha kanjani umuntu ofana nawe ngezenzo?
Washo umkhulu omncane, uPaulos ngesikhathi ethatha impesheni ebuthisheleni - ekhala ngenkece ethathwe wuhulumeni kweyakhe yomhlalaphansi - wathi: “Uyabona mzukulu, yisigebengu uhulumeni! Aaaaaawu! Yisigebengu sokuqala sokugcina…” Sengiyabona ukuthi wayeqinisile umkhulu, uhulumeni izigangi uzivikela kuhle komhlambi wezinyathi uvikela inkonyane eliyi- family member lidonswa ngamabhubesi nje ngoba wona nazo bakwi-same WhatsApp Group.
Uyabona nje laba bantu abasike izintambo zamalambu enkundleni yaKwaMamdekazi, uzozwa kusasa sekuthiwa bayamasha, bakhala ngokuthi ikhansela belilaleleni kuntshontshwa lezi zintambo - uzibuze ukuthi kanti lineziqu ze-security yini leli khansela osekufanele linikele ngesikhathi salo sokulala liyoqapha izintambo zikagesi enkundleni.
Sekucacile, kumele kusetshenzwe i- overtime ukuze kushintwe izinga lokucabanga kubantu bakithi ngoba lehle njengerandi lizwa i- speech sikaNgqongqoshe Malusi Gigaba ethula isabelomali ngesonto eledlule. Kangazi noma yingoba ngakhulela emakhaya lapho into yomphakathi yayihlonishwa ngendlela eyisimanga, iyangidida mina le nto yokuthi abantu bangenele impahla yomphakathi ngezagila, yizizenze ngisho nangama-okapi imbala, bayibulale.
Sikhula le emakhaya, wawungeke uzwe kuthiwa kushiswe isikole - leyo nto ize yaqalwa yilaba bantu bepolitiki cishe ngonyaka we-1992 abaxabana namaBhunu kodwa bashisa izikole zabo. Uyazi futhi abantu bepolitiki! Ungafunga ukuthi ukucabanga kubona kuvinjwe ngeGroup Areas Act, bona nokucabanga ungathi yingulube ne-mosque, selokhu kwagqama bona nje izinto zonakele, kwakungcono kusakhala isicathulo samakhosi ezindaweni zasemakhaya - yize nje amanye awo ayebuye acabange ukuthi abantu yizimbongolo nje zokugitshelwa kuyolinywa ngazo.
Laba bantu abawuhlupho njalo emiphakathi yile genge eyacabanga ukuthi esikoleni kuse-snake park yabaleka nge- break. Ufice umuntu ongunyokolume ngokozalo - ngoba wena usuyasebenza - aqale akubize ngobhuti-ankela, kuham- be isikhathi akubone uhamba ngemoto, adideke kakhulu akubize ngo-bhudda, ungunyokolume njalo lo muntu! Hulumeni, awume kancane ngamalungelo ezigebengu, cabangela thina phela esihamba ngendlela eyamukelekile.
Ngimane ngizishaya ngendlebe etsheni nje ngoba kungenzeka ukuthi ziyasho lezi zepolitiki zithi: “Akudikizi nqulu, ngeke silalele oRev Mkhekhelezi lezi zinto ezizace sengathi yintambo efakwa okhalweni lomuntu owelashwayo…”
Bakwethu, masihloniphe izinto ezakhiwe ezindaweni zethu, lezi zinto kakuzona ezikahulumeni, ngezethu. Bazalwane, kayikho into ebuhlungu njengokushiya lapho usuhlale khona isikhathi eside, ngenxa yezizathu ezithile, ngithi anginishiyi nodwa, nginishiya nomthokozisi - hhayi-ke lo wasesiGumbuqwini, ngakwami KwaMamdekazi, oziba ukukhula njengale nkukhu esasithi umagugelejele, engathandanga nje ukuba yinde njengezinye. Nginithanda nonke emakhaya!
Hikensile ngopfu ma-Afrika!